Denmark oo joojisay Talaalka AstraZeneca oo lagu arkay Dhibaato Dadkii lagu talaalay Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka DenmarkDenmark oo joojisay Talaalka AstraZeneca oo lagu arkay Dhibaato Dadkii lagu talaalay
Denmark oo joojisay Talaalka AstraZeneca oo lagu arkay Dhibaato Dadkii lagu talaalay
March 11, 2021 Wararka Denmark, Wararka Maanta Somaliska 0
Hay’adda caafimaadka Denmark ayaa si ku-meel-gaadh ah u joojisay tallaalka tallaalka AstraZeneca ee ka dhanka ah Corona. Waxayna SVT ka soo xigatay wakaaladda wararka ee Reuters in sababta ay ugu wacan tahay kiisaska xinjirowga dhiigga ee halista ah ee tallaalka ku jira, lamana oga weli inay tani xiriir la leedahay tallaalka iyo in kale.
Maamulka Caafimaadka wuxuu qaatay go’aan ah inuu joojiyo talaalka talaalka mudo ah 14 maalmood, ilaa laga baarayo kiisaska istarooga.
Raiisel wasaare Mette Frederiksen ayaa xaqiijisay go’aanka lagu joojinayo talaalka. Waxay sheegtay in hakinta ay sii socon doonto ilaa hey’adaha ay khuseyso ay sawir cad ka helaan. “Waa wax laga xumaado, dabcan, laakiin waa xilli hore in wax go’aan ah la gaaro,” ayay raacisay. Sida uu soo xigtay TT.
Tallaalkan oo ay soo saartay shirkadda British-ka ah ee Iswidishka iyo Ingiriiska ah ee AstraZeneca, ayaa dood ka dhalisay waxtarka ay u leedahay dadka waayeelka ah, ka hor inta aanay Hay’ada Caafimaadka Dadweynaha ee Sweden go’aansan inay siiso waayeelka ka dib daraasado caddeeyay waxtarkeeda.